မောင်စေတနာ: Proxy ရိုက်ပြီး ကျော်ကြည့်စရာ မလိုပါ
ကျွန်တော့ ရဲ့ Ning ကိုဝင်လို့မရလို့ဆို
THU HTET THI HA said...
i can't install it. pls advice me below error.
PhProxy - InBasic 3.0.2B could not be installed because it is not compatible with Firefox 3.6.10
Mozilla Firefox 3.6.10 နဲ့မှ အဆင်ပြေမယ် ပြောတာပါ။ မိတ်ဆွေမှာ ရှိတဲ့ Mozill က version နိမ့်နေလို့ပါ။ version မြှင့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
8:58 AM, September 20, 2010
မဟုတ်ဘူးအကို၊ Mozilla Firefox 3.6.10 သုံးနေတာပါ၊ version မြင့်နေလို့လား?? same error ပဲပေါ်နေတယ်၊
Mozilla Firefox 3.6.10 သုံးနေပါတယ်။မရဘူးဖြစ်နေတယ်